Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qaabilay Wafdi ka socda Hay’adda Tadamun – Radio Muqdisho
Wafdi ka socda Hay’adda Wadaniga ah ee Tadamun oo ka shaqaysa arrimaha bulshada sida Waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha, Howlaha Gargaarka iyo Horumarinta ayaa maantay kulan la qaatay Madaxweynaha Dowlad goboleed Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
Wafdiga ayaa Madaxweynaha Koonfur Galbeed uga warbixiyay deeq raashin ah oo hay’addu u qaybisay 3,000 oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ay abaartu saamaysay ee ku dhaqan Magaalada Baydhabo.
Deeqdan ayaa qayb ka ah Mashruuca Taageerada Sugnaanta Cunnada Dalka oo ay taageerayso Xarunta Boqor Salmaan ee Gargaarka iyo Howlaha Bani’aadantinimada ee Boqortooyada Sucuudiga, waxaana looga jawaabayay baahiyaha ka dhashay abaaraha baaxadda leh ee jira dalka.
Hay’adda Tadamun ayaa qayb weyn ka qaadatay dadaalada socda ee loogu gurmanayo dadka abaartu saamaysay, iyadoo mashruucan ka fulisay dhammaan dowlad goboleedyada qeybta ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ustaad Cismaan Abshir oo wafdiga hoggaaminayay ayaa sheegay in Deeqdan Raashinka ah ay isugu jirto Bur, Bariis, Sonkor iyo Saliid.
Ergeyga gaarka ee Gurmadka Abaaraha oo fogaan aragga kula kulmay Wasiiro